Software Devloper Archives - Glory Assumption Space
Software Developer – Male - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ - ၆၀၀,၀၀၀ / ရန်ကင်းမြို့နယ်
Software Developer – Male - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ - ၆၀၀,၀၀၀ / ရန်ကင်းမြို့နယ်။ (အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။) - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် - PHP , Software developer ပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ လုံးဝရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Information Technology ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (၉နာရီမှ ၅နာရီ) အထိ - စနေ တပတ်ခြား တခါ တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ IT Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ်ာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Software Developer - Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်ရှိ IT Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။
Software Develpers – Female (5) Posts / Salary 300,000 Ks ~ 500,000 Ks / Botahtaung Township.
Bechelor Degree in Computer Science or any equivalent diploma.
2 Years or more experience in related field.
Developing or Customization projects on Net platforms.
Related to Banking & Payment network such as mobile Application.
EDC Terminal & Web portals.
Ability to work independently, specific training will be provided if needed.